नेक्सप्लानन बनाम मिरेना: मुख्य भिन्नता र समानताहरू - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार प्रेस कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कम्पनी खेलहरु औषधि बनाम मित्र चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> नेक्सप्लानन बनाम मिरेना: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
नेक्सप्लानन (इटनोजेस्ट्रल) र मीरेना (लेभोनोरजेस्ट्रेल) गर्भनिरोध रोक्न मद्दत गर्ने दुई गैर-गोली रूप हो। दुबै औषधिहरूले महिला हर्मोन एनालगहरू समावेश गर्दछ जुन बिभिन्न प्रकारहरूमा प्रोजेस्टिनहरू हुन्। नेक्सप्लानन माथिल्लो पाखुराको छाला अन्तर्गत रोप्दछ जब कि मिरेना गर्भाशयमा घुसाइएको इंट्रायूटरिन उपकरण (IUD) हो। तिनीहरू शुक्राणुहरूको लागि प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गरेर गर्भावस्थालाई रोक्दछन् ताकि तिनीहरू निषेचनको लागि अण्डमा पुग्न सकेनन्। हामी उनीहरूको समानता र भिन्नताहरू यहाँ छलफल गर्नेछौं।
नेक्सप्लानन एक इटनोजेस्ट्रल इम्प्लान्ट हो जुन खेलको आकार हो। यो एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा पेशेवर द्वारा माथिल्लो पाखुराको छाला अन्तर्गत रोपण गरिन्छ। नेक्सप्लाननलाई २००१ मा गर्भावस्था रोक्न अनुमोदन गरिएको थियो।
काउन्टर मा भिटामिन डी नुस्खा
नेक्सप्लाननमा ton 68 मिलीग्राम इटोनोजेस्ट्रल हुन्छ, एक प्रकारको प्रोजेस्टिन जुन प्रोजेस्टेरोनको नजीक मिल्छ। इम्प्लान्टेसन पछि, नेक्सप्लाननले pregnancy बर्ष सम्म गर्भावस्था रोक्न मद्दत गर्न सक्छ। यस अवधि पछि यो हटाउनुपर्नेछ र बदल्नु पर्छ।
Nexplanon मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
नेक्सप्लानन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
मिरेना एक लेभोनोर्जेस्ट्रल-रिलीजिंग आईयूडी हो जुन सानो T-आकारको उपकरणको रूपमा देखा पर्दछ। यो सिधा गर्भाशयमा प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा पेशेवर द्वारा सम्मिलित गरिन्छ। मिरेनालाई २००० मा गर्भावस्था रोक्न र भारी मासिक रक्तस्राव कम गर्न अनुमोदन गरिएको थियो।
मिरेनामा mg२ मिलीग्राम लेभोनोर्जेस्टल हुन्छ जुन समयको साथ बिस्तारै जारी हुन्छ। इम्प्लान्टेसन पछि, मिरेनाले pregnancy बर्ष सम्म गर्भावस्था रोक्न मद्दत गर्दछ। यस अवधि पछि यो हटाउनुपर्नेछ र बदल्नु पर्छ।
Nexplanon vs Mirena साइड साइड साइड तुलना
नेक्सप्लानन र मिरेना प्रोजेस्टिन युक्त औषधि हुन् जसले गर्भावस्था रोक्न सक्दछन्। तिनीहरूको फरक रूपहरूको बावजुद, दुबै औषधिहरूको समान प्रभावहरू छन्। तिनीहरूको सुविधाहरू तल तालिकामा अन्वेषण गर्न सक्दछन्।
का लागि निर्धारित
Menorrhagia (भारी मासिक धर्म रक्तस्राव)
बायर हेल्थकेयर फार्मास्यूटिकल्स
साझा साइड इफेक्टहरू
मासिक धर्म अवधि छुटेको छ
स्तन दुखाइ वा कोमलता
दुखाइ, रक्तस्राव, वा प्लेसमेन्टको समयमा वा पछाडि चक्कर
गर्भाशयबाट उपकरणको निष्कासन
त्यहाँ जेनेरिक छ?
हो, इटनोजेस्ट्रेल प्रत्यारोपण
जेनेरिक उपलब्ध छैन
यो बीमा द्वारा कभर गरिएको छ?
तपाईको प्रदायक अनुसार फरक हुन्छ
औसत नगद मूल्य
68 १,०२० प्रति mg 68 मिलीग्राम इंट्राउटरिन उपकरण
52 74 .74.74 per प्रति mg२ मिलीग्राम इंट्रायूटरिन उपकरण
एकलकेयर छूट मूल्य
CYP3A4 inducers (efavirenz, phenytoin, topiramate, आदि)
CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू (itraconazole, fluconazole, ketoconazole, आदि)
सेन्ट जोन्स Wort
प्रोटीज अवरोधकर्ताहरू (रितोनाभिर, अताजानावीर, आदि)
के म गर्भावस्था, गर्भवती, वा स्तनपानको योजना बनाउँदा प्रयोग गर्न सक्छु?
Nexplanon गर्भावस्था कोटि X मा छ र भ्रूण हानी निम्त्याउँछ। नेक्सप्लानन गर्भवती महिलाहरूमा contraindication हो।
Mirena गर्भावस्था कोटि X मा छ र भ्रूण हानी गर्न सक्छ। मिरेना गर्भवती महिलामा contraindated छ।
नेक्सप्लानन र मिरेना गर्भावस्था रोक्नको लागि दुई प्रभावकारी विकल्पहरू हुन्। यद्यपि तिनीहरूसँग प्रोजेस्टिन्सका बिभिन्न प्रकारहरू छन्। नेक्सप्लाननमा माथिल्लो बाहुमा इन्टोजेस्ट्रल इम्प्लान्टेड हुन्छ जबकि मीरेनाले लेभोनोर्जेस्ट्रल गर्भाशयमा रोपेको हुन्छ।
नेक्सप्लाननले pregnancy बर्ष सम्म गर्भावस्था रोक्न सक्छ। मिरेनाले pregnancy बर्ष सम्म गर्भावस्था रोक्न सक्दछ। Mirena ले भारी मासिक रक्तस्रावको उपचार गर्न सक्छ।
नेक्सप्लानन र मीरेनासँग मासिक धर्म र स्तन दुखाइमा परिवर्तन जस्ता साईड इफेक्टहरू छन्। Mirena ले अधिक स्थानीयकृत प्रतिकूल प्रभावहरू जस्तै गर्भाशयको वरिपरि दुखाइ, स्पटि increased बढेको, र डिम्बग्रंथि अल्सर हुन सक्छ। मिरेनासँग पनि गर्भाशयबाट बाहिर निकाल्ने जोखिम छ जुन अर्को डाक्टरको पुन: सम्मिलित भ्रमणको लागि खर्च हुन सक्दछ।
जबकि Mirena अधिक समय गर्भावस्था रोक्न सक्छ, यो केहि अनावश्यक साइड इफेक्ट पनि। नेक्सप्लाननसँग अधिक सुविधाजनक इम्प्लान्टेसन विधि हुन सक्छ तर मीरेना भन्दा छोटो अवधि रहन्छ।
यो जानकारी तुलनात्मक सिंहावलोकन हो। कुन विकल्प तपाईको लागि उत्तम हो भनेर निर्धारण गर्न डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्
ल्याक्टोज पचाउन नसक्नु भनेको के हो? कारण र लक्षणहरू, वर्णन गरियो
किन्ने ड्रग्समा सिंगलकेयरको साथ बचत सुरू गर्नुहोस्
आतंक बनाम हृदयघात
सबैभन्दा भरिने १०० क्यालोरी स्वस्थ नाश्ता
नुकिन्टा बनाम अक्सीकोडोन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
कसरी फ्लू रोक्न
के यो गर्भवती हुँदा सिम्बाल्टा लिन सुरक्षित छ?
दुलेरा बनाम सल्लाहकार: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
टायलनॉल vs बनाम पर्कोसेट: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
उच्च रक्तचाप को लागी बीटा ब्लकर्स को विकल्प
cialis र cialis पेशेवर बीच के फरक छ
एक महिला को औसत bpm के हो?
म गर्भावस्था को समयमा मतली को लागी के लिन सक्छु?
eliquis प्रति महिना कति खर्च हुन्छ?
कति समय पछि म योजनाbलिन सक्छु
तपाइँलाई कहिले ज्वरो आउँछ तापक्रम